Onye njem uka nke ahia putara Coopetition | Martech Zone
Monday, November 5, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Blog nke Andy, Onye njem ala ahia, bụ ihe a ga-agụ na akwụgoro m oge ụfọdụ. M na-echeta oge mbụ Andy dechara blọọgụ m - Enwere m obi ụtọ! Andy bụ ezigbo ihe atụ ebe m ga-achọ ka blog na azụmaahịa m dịrị na afọ ole na ole.
Ihe dị ịtụnanya gbasara ịde blọgụ bụ na imetụ onwe gị aka na-enye ohere maka echiche pụrụ iche. Echiche ọ bụla pụrụ iche, ọbụlagodi na ha dị iche na ibe ha, na-enye gị ngụkọta nke ozi ị chọrọ iji mee mkpebi bara uru. Echere m ya dị ka igbe nke crayons… ị chọrọ nnọọ ole na ole na agba kemfe ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ịmepụta ihe ziri ezi na foto. Agụrụ m onye njem ala ahịa n'ihi na echiche Andy dị iche na nke m ma enwere m ike ịmụ ọtụtụ ihe na ya.
Nke a nwere ike iyi ihe nzuzu nye ụfọdụ ndị. Okwesighi ka anyi bụrụ mpi? Ọ bụ na anyị ekwesịghị ịnwa ịzu ohi ndị na - agụ akwụkwọ anyị? Ọ dịghị ma ọlị! N'adịghị ka mgbasa ozi kachasị ebe ndị mmadụ na-atụba ibe ha mmanya na-adịghị akwụsị, blọọgụ kwesịrị inwe gị mmasị na obi, ọ bụghị nke anyị. Anyị ghọtara na, ọbụlagodi na ọ pụtara ịkọwa asọmpi ahụ, ọ na-enye ndị na - agụ akwụkwọ anyị ozi ha chọrọ itolite. Nke ahụ bara uru ma bụrụ nke uzo, na-ewulite ntụkwasị obi ọzọ ma na-ebute ndị na-agụ ya ụzọ.
N'okpuru ala: Ọ bụrụ na ị na-edebanye aha na blọọgụ m, ị kwesịrị ịdenye aha Andy!
Mara: Ọsọ enyemaka anaghị abịa na-enweghị mkpali na-akpata ego. Ana m enwe olileanya merie $ 500 na Andy na-etinye ebe ahụ! 🙂
Tags: Analyticsndị dere ọdịnayazụrụ ọdịnayaịzụta ọdịnayangwaọrụ
Nov 5, 2007 na 3:24 PM
Nke a blog post e nyere m ume n'ihi na m na-arụ ọrụ na-emepe emepe ụfọdụ ọhụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gụnyere a blog. Enwere m ntakịrị ụjọ banyere ịmalite n'ihi asọmpi ahụ, mana agụọla m ọtụtụ posts gụnyere nke gị gbara m ume ịmalite. Echere m na enwere ohere zuru ezu maka ọtụtụ saịtị asọmpi, ọ dịkwa m mkpa itinye uche m na ịme ihe kachasị mma maka ndị na-agụ akwụkwọ m. N'ụzọ nke a, blọọgụ m ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ihi na ọ bara uru ma baa uru.
Nov 5, 2007 na 8:27 PM
Daalụ Doug! Ekwenyere m, enwere ọtụtụ ịhụnanya ịgagharị!